२०७७ आश्विन २१, बुधबार २०:३० बजे
मधेश24,जनकपुरधाम । प्रदेश २ अस्थायी राजधानी जनकपुरधाममा डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा युवाहरूले प्रदर्शन गरेको छ।
कोभिड–१९ क्विक रेस्पोन्स टिम र स्थानीय युवाहरुको संयुक्तरुपमा रामानन्द चोकमा बुधबार साँझ डा. केसीको समर्थन र सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरिएको हो ।
उनले भने, ‘डाक्टर केसी १९ औं पटकसम्म अनसनमा बसेपनि उनको माग पुरा नहुनु दुःखद हो ।’ स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार तथा सुशासनका लागि डा. केसीले १९औं सत्याग्रह सुरु गरेको आज २४ औं दिन भइसकेको छ । उनको स्वास्थ्य नाजुक बन्दै गईरहेको छ । तर, सरकारले भने अझैपनि उनको माग पूरा गर्न र जीवनरक्षाका लागि कुनै कदम चालेको छैन् ।